Naannoo Oromiyaatti namoonni malaammaltummaan shakkaman 75 to'annoo seeraa jala oolan - BBC News Afaan Oromoo
Naannoo Oromiyaatti namoonni malaammaltummaan shakkaman 75 to'annoo seeraa jala oolan
Komishiner Abbabaa Kabbadaa yeroo middiyaaleef dhimma malaamaltummaa irratti ibsa kennan
Naannoo Oromiyaatti namoonni malaammaltummaan shakkaman 75 to'annoo seeraa jala ooluu Koomiishiniin Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa beeksise.
Mootummaan federaalaa duula malaammaltummaa fi namoota mirga namoomaa sarban jedhaman irratti gaggeessaa tureen hoggantoota olaanoo to'annoo jala oolchaa tureera.
Duulli farra malaammaltummaa sadarkaa federaalaatti jalqabe kun gara naannoleettis akka bu'uu qabu hawwaasnis gaafataa tureera.
Mootummaanis akkuma dhimma kana irratti ibsa kennaa tureen hojii malaammaltoota to'annoo jala oolchuu sadarkaa naannoottis jalqabeera. Haaluma kanaan Naannoo Oromiyaatti namoonni hoggansa garaagaraa irra turan aangoo isaaniitti fayyadamuun faayidaa isaaniif hin malle argataa turaniiru jedhamuun shakkaman to'atamaa jiraachuu Komishiniin Naamusaa fi fFarra Malaammaltummaa Oromiyaa himeera.
Koomiishinarri Koomishinii Naamusaa fi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa Obbo Abbabaa Kabbadaa, qorannoo koomishinichi damee isaa 9 irratti gaggeessaa tureen namoonni yakka malaammaltummaan shakkaman 75 ta'an to'annoo seeraa jala oolfamuu ibsaniiru.
Waldaa Liqii fi Qusannaa Oromiyaa duraanii keessaa;
Obbo Tashoomaa Laggasaa, daayreektara olaanaa
Obbo Tashoomaa Kabbadaa, koree maanaajimantii olaanaa
Aadde Maskaram Dabbabaa, koree maanaajimantii olaanaa, namoota to'ataman kanneen keessatti aragamu.
Akkasumas Ejensii Bittaa fi Dhabamsiisa Meeshaalee Mootummaa duraanii keessaa; Daayreektara olaanaa fi koree maanaajimantii kan turanii fi yeroo ammaa hoogganaa olaanaa naannoo kan ta'an;
Obbo Mohaammad Qaasim,
Obbo Indaalkaachoo Balaachoo,
Obbo Yilmaa Dheereessaa, akkasuma to'annoo jala oolaniiru.
Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa duraaniitti daayreektara olaanaa fi ammammoo daayreektara olaanaa Intarpiraayizii Ijaarsa Bishaan Oromiyaa kan ta'an obbo Abdoo Galatoo fi Biiroo Misooma Magaalaa fi Manneen Oromiyaa duraaniirraa ammoo itti aanaa hoogganaa kan turan, yeroo ammaa hoji gaggeessaa Paarkii Indaastirii Boolee Lammii kan ta'an obbo Mangistuu Raggaasaa, to'annoo jala ooluu himaniiru.
Biiroo Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa duraaniitti hoji gaggeessaa kan turanii fi amma kantiibaa magaalaa Galaan kan ta'an obbo Bahaaruu Taklee, Bulchiinsa Magaalaa Shaashamanneerraa;
Kantiibaa duraanii obbo Fayyisaa Raggaasaa fi
Itti aanaa kantiibaa kan turan obbo Abdoo Gabayyoo as keessatti argamu.
Namoonni shakkamanii to'annaa seeraa jala oolfaman kunneenis Birrii miiliyoona 71 qisaasessaniiru jedhamuuni.
Dabalataan akka koomiishinar Abbabaan jedhanitti koomiishiniin isaanii baatii 5 keessatti namoota 143 irratti murtii adabbii hidhaa waggaa 3 hanga 21 itti murteessiseera.
Namoonni kunneenis Birrii miiliyoona dhibba 2 fi miiliyoona 50 qasaasun isaanii ibsameera.
Bulchiinsi Amala Sirreessaa Federaala hooggantoota haaraa argate
Xalayaa Maayik Koofmaan: Geetaachoo Asaffaa seeratti dhiyeessuuf xalayaan barraaye
Sudaan biyyoonni Afrikaa Hidha Abayyaarratti waliigalteerra ga'uu akka deeggaraniif gaafatte
Daqiiqaa 11 dura